Health Article Archives - Page2of2- Vejthani Hospital
Home > Health Article (Page 2)
သွေးဖိအားများခြင်း – အသံတိတ်လူသတ်သမား
သွေးဖိအားများခြင်း (သို့မဟုတ်) သွေးတိုးခြင်းကို ရောဂါလက္ခဏာများ မပြဘဲ သွေးကြောများနှင့်နှလုံးကို ပျက်စီးသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောကြောင့် အသံတိတ်လူသတ်သမားလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးခြင်းကို မကုသဘဲထားပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများသည် အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သွေးလွှတ်ကြောများကိုပျက်စီးခြင်း - သွေးကြောများသည် အောက်ဆီဂျင်ပါသော သွေးကို နှလုံးမှသယ်ဆောင်၍ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုသွေးကြောများကို ထိခိုက်လာပါက ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှု၊ မျက်လုံးထိခိုက်မှု နှင့် အစွန်ဖျား သွေးလွှတ်ကြောပျက်စီးမှု များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသံတိတ်လူသတ်သမားလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ် နှလုံးကိုထိခိုက်ခြင်း - သွေးဖိအားမြင့်တက်ခြင်းသည် နှလုံးကို ဝန်ပိအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ နှလုံးသည် ကျန်သောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း များကို သွေးလွှတ်ရန် အတွက် ပို၍အလုပ်လုပ်ရပါသည်။...
ရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် မိမိဘာသာအိမ်တွင် ရင်သား တစ်ရှူးများပြောင်းလဲခြင်းရှိ မရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော အမျိုးသမီးတိုင်း တစ်လတစ်ကြိမ်ခန့် ပုံမှန်ရင်သားစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သင့်သည်။ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်သော အမျိုးသမီး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ရင်သားတွင် အကြိတ်ရှိသည်ဟု စမ်းသပ်သိရှိကြပါသည်။ ထိုကြောင့် မိမိဘာသာ ရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် စောစီးစွာ ရောဂါရှာဖွေနိုင်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးက ရင်သားဓာတ်မှန် နှင့် ဆရာဝန်၏ပုံမှန်စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှု မရနိုင်သော အနေအထား ရှိပါက မိမိဘာသာရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် စောစီးစွာ သိရှိနိုင်သဖြင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်ကုသနိုင်ပါသည်။ မိမိဘာသာ ရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် မိမိရင်သား ပုံမှန်အနေအထား ကို သိသဖြင့် ပြောင်းလဲမှု တစုံတရာ ရှိပါက ဆရာဝန်၊ဆရာမ များကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ မိမိဘာသာရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်း ၃...
အသည်း၊ပန်ကရိယ၊သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက် ဝေ့ဌာနီ HPB clinic
ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊အောင့်ခြင်းသည် ဂတ်စ် သို့ အစာမကြေခြင်း ကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ရိုးရိုးနာခြင်းနှင့် စူးပြီးနာခြင်း၊ တင်း၍ နာခြင်း စသည့် နာကျင်ခြင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ အစာအိမ်အနာ၊ သည်းခြေကျောက် နှင့် အသည်း ကင်ဆာတို့ အထိဖြစ်နိင်ပါသဖြင့် သင်အနေနှင့် တိကျစွာ အဖြေရှာလိုပါက ဝေ့ဌာနီဆေးရုံရှိ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများက စစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။ အနှစ်၂၀ကျော်ကြာနိုင်ငံတကာမှ လူနာများ ယုံကြည်အားထားရသော ဆေးရုံဖြစ်သည့် ဘန်ကောက်ရှိ ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးသည် အသည်း၊ပန်ကရိယ၊သည်းခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆေးခန်းကို အစာခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများက ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊အထူးကုသခြင်း နှင့် ပတ်သက်သောဆွေးနွေး အကြံပေးမှုများဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ Dr. Jade...
ရင်သားကင်ဆာ – ရောဂါလက္ခဏာများ၊အန္တာရာယ် ရှိနိုင်သောအကြောင်းရင်းများ နှင့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်း
ရင်သားကင်ဆာသည် ရင်သားရှိ ဆဲလ်များ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကြီးထွားလာခြင်းက နေ စပါတယ်။ ရင်သားနှင့် ဘေးပတ်လည်ရှိ တစ်ရှူးများဆီသို့ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားပြီး နောက် ပြန်ရည်ကြော နှင့် ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း၏ သွေးကြောများဆီသို့ ပြန့်နှံ့ ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးပတ်လည်ရှိ ၃၀ရာခိုင်နှုန်း သော ရင်သားကင်ဆာ သည် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆဲလ်များပြန့်ပွားခြင်းသည် ရင်သားကင်ဆာကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ အဆီပါဝင်မှုနှုန်း မြင့်မားသော အစားစာများသည် ကင်ဆာရောဂါကို ပိုမို လွယ်ကူစွာ ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ အမျိုးသားကင်ဆာတက္ကသိုလ်၏ လေ့လာချက်များအရ ဆေးပညာဂျာနယ်တွင်- ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုခံယူထားသော အမျိုးသမီးများ။ အဝလွန်သောအမျိုးသမီးများသည်အဝမလွန်သောအမျိုးသမီးများထက် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ၂ ဆထိမြင့်မားပါတယ်။ ...
ခွဲစိတ်ရာအနည်းငယ်ဖြင့် နှလုံး အဆို့ရှင်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း – သင့်ရဲ့ နှလုံးကို နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် စောင့်ရှောက်ပါ
ှလုံးတွင် အခန်းလေးခန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထား ပြီး အဆို့ရှင် လေးခုဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းရန်နှင့် သွေးပြန်လည်စီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အချို့သူများတွင် အဆို့ရှင် သည် လုပ်ငန်းကောင်းစွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်တာလဲရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ရှူးများထူလာခြင်းကြောင့် အဆို့ရှင်၏ အပေါက်ဝ များကျဉ်း သွားခြင်းကို အဆို့ရှင် ကျဉ်းခြင်း (Valvular Stenosis) ဟုခေါ်ပြီး အဆို့ရှင်များ ကောင်းစွာ ပြန်မပိတ်နိုင်ခြင်းကို အဆို့ရှင်မလုံ၍သွေးနောက်ပြန်လှန် စီးဆင်းခြင်း (Valvular Regurgitation) နှလုံးဟုခေါ်ပြီး ထိုအခြေအနေများသည် နှလုံး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကောင်းစွာမလုပ်နိုင်သော ကြောင့် နှလုံး လုပ်ငန်းကျရှုံးခြင်း ကို ဖြစ်စေပါသည်။ နှလုံးပြဿနာများ ကို ပုံမှန်အားဖြင့်...
အူမကြီးကင်ဆာအားစတင်တွေ့ရှိသောအဆင့် – ခွဲစိတ်ရာအနည်းဆုံးဖြင့် ကုသနိုင်သော အူမကြီးနှင့်အစာဟောင်းအိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှု
ကင်ဆာ အများစုနှင့် အူသိမ်နှင့်အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာသည် colorectal adenoma ဟုခေါ်သော အစာအိမ်ဟောင်းနံရံရှိ သေးငယ်သောအကြိတ်မှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မကုသခဲ့ပါက အစာအိမ်ဟောင်းနံရံမှတဆင့် အဆိုပါအကြိတ်သည် ပြန့်နှံသွား၍အူမကြီးကင်ဆာ ကိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးမှ Dr. Auchai Kanjanapitak ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် မစင်ထဲတွင်သွေးပါခြင်း၊ မစင်တုံးသေးသွားခြင်း၊ ဝမ်းသွားချိန်ပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ အစာအိမ်သက်သောင့်သက်သာမရှိခြင်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးကင်ဆာသည် အူမကြီး၏အကြိတ်နေရာပေါ် မူတည်၍ ရောဂါလက္ခဏာအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်။အစာဟောင်းအိမ်မှသွေးထွက်ခြင်းနှင့်အကြောင်းရင်းရှာမရသောသွေးအားနည်းခြင်း တို့သည်အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။မိသားစုတွင်ကင်ဆာရှိဖူးသူများ၊အဝလွန်သူများနှင့်ဆေးလိပ်သော က်သုံးသူများတွင်အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ အူမကြီးကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းကို ဝမ်းထဲတွင်သွေးပါ မပါစစ်ဆေးခြင်း၊ မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။အများဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကတော့ အူမကြီးကိုမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကုသမှုနည်းကတော့ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။လူနာ၏ကင်ဆာအဆင့်နှင့်တခြားသောဆေးကုသမှုပိုင်းတို့ပေါ်မူတည်၍ ဆရာဝန်က သင့်တော်သော ကုသမှုဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး သို့မဟုတ် ခီမိုဆေးသွင်းကုသနည်းကို ညွှန်ကြားပါမည်။ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပါက လူနာများသည် ခွဲစိတ်မှုကြီးမား၍ ဝမ်းဗိုက်ကိုဖောက်ထားရခြင်း...
အရင်ကကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်နေရတာကိုစိတ်ချမ်းသာနေရင်းကနေ စိတ်ဝင်စားမှုများ ဆုံးရှုံးသွားပြီလား? ကူညီမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့မှုတို့ခံစားနေရလား ? နေ့တစ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းဖို့ရန် စိတ်ပျက်နေမိပြီလား? အဖြေရှာရင်တော့ရှိပါတယ် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ? ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရနိုင်မလဲ? သင့်အသက် ၆၀ သို့ဝင်သွားပြီဆိုလျှင်သင်ရဲ့ ခန္တာကိုယ်နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေနေသည် အကျဘက်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီး၊ ကြွက်သားများ၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောတို့သာမက စိတ်ခံစားမှုများသည်လဲ လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာပါတယ်။ စိတ်ကျခြင်းသည် ဦးနှောက်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ် ပြောင်းလဲမှုတို့ကြောင့်မကျန်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ သုတေသနများအရ အခြားသောအကြောင်းရာများဖြစ်တဲ့ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း၊ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆေးဝါးများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း နှင့် ကြမ်းတမ်းသော ဘဝအခက်ခဲများကြောင့် လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့ဆေးဝါးများသည် အသက်ရွယ်ကြီးသူများတွင် စိတ်ကျခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းသာမက မကျန်းမာခြင်းအပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု ကြာရှည်စွဲသောက်ရသောဆေးဝါးများ၊ အနာသက်သာဆေးများ၊ မသန်စွမ်းခြင်းနှင့် သူတစ်ပါးအပေါ်မှီခိုနေရခြင်း အခြေနေတို့တွင် စိတ်ကျခြင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားတတ်ပါတယ်...